नेपालमा आन्तरिक विमानस्थल चल्न छाडे भन्ने समाचारहरू नियमितजसो आइरहेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकले पनि के देखाउँछ भने- ५५ वटा विमानस्थलमध्ये करीब ३० को हाराहारीमा प्राविधिक हिसाबले सञ्चालनमा आएका छन् । केही नयाँ साझेदारी मोडलमा बाहेक खासै नयाँ एयरपोर्ट सञ्चालनमा आएको पाइँदैन । यद्यपि स्ट्रिप नै निर्माण कार्य रोकिएको भने पक्कै होइन ।
चुनावको खाजा बनिरहेका विमानस्थल र देशको वर्तमान राजनीतिले यो रोकिने संकेत दिँदैन भन्न सकिन्छ । तर सञ्चालनमा रहेका भनिएका विमानस्थलहरूमा पनि विमान सेवा त्यस्तो भरपर्दो रूपमा देखिन नसकेको पक्कै हो । यात्रु अभावप्राय: विमान कम्पनीले देखाउने प्रमुख कारणमध्ये एक हुँदै आएको छ ।
जिल्लामा यतिसम्मको अवस्था हुन्छ कि सेड्युल परिवर्तन हुँदा पनि यात्रुवर्गमा सूचना पुग्दैन, निजी तथा सरकारी वायु सेवाको संलग्नताले झन् गुणस्तरमा अचाक्ली सुधारको अपेक्षा गर्दछ, तर यो सिद्धान्त हामीकहाँ फेल खाइरहेको छ । यी र यस्तै 'मार्केट स्ट्राटेजी’ले गर्दा विमानस्थलहरू निकम्मा बनेका हुन् भन्दा फरक नपर्ला ।
अन्तमा नयाँनयाँ एयरपोर्ट सञ्चालनमा देखिएको तदारुकताले केही आशाको सञ्चार भने गरेको छ । तर ती विमानस्थलको दिगो सञ्चालन र सबल बनाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधार जस्तै- सदरमुकामसम्म बाटो तथा सहज यातायातको व्यवस्था, टिकटको सहज वितरण, समयमै आवश्यक सूचना स्थानीय सञ्चार माध्याममा प्रसारण तथा प्रकाशन गर्न सकेको खण्डमा पुरानो शाख ब्युँताउन सकिन्छ कि ?
जहाज चढ्ने कल्चर विकास गर्नुपर्ने बेलामा हामी कहीँ अन्तै रुमलिएर बस्यौं कि ? समयमै यात्रु वर्गमा राम्रो सेवा दिएर सकारात्मक प्रभाव छाड्दै यसको दिगो विकासको नयाँ मोडेल विकास गर्ने कि नगर्ने ? महात्मा गान्धीलाई अरुले गोली हानेर मारे, हिटलरलाई त्यही गोली आफैँ हान्न कसैले रोक्न सकेन । अर्थतन्त्र त्यसरी नै चल्छ । अब सोच्ने पालो सरोकारवालाको ।